४ वर्षअघि रविले गाएको गीत ! [भिडियाेसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
४ वर्षअघि रविले गाएको गीत ! [भिडियाेसहित]
काठमाडौं, मंसिर ८ । ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ को ‘टप ५’ मा पुग्न तयारी गरिरहेका रवि ओडको चर्चा अन्य प्रतिस्पर्धी जस्तै व्यापक छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उनको सुमधुर आवाजका पारखी धेरै छन् ।
रविले नेपाल आइडलमा आउनुअघि पनि थुप्रै मञ्चमा शानदार प्रस्तुती दिइसकेका छन् । तर, त्यसबेला केवल उनी ‘गाउँघर आफ्नै शहर’ मा मात्र सिमीत थिए । कम मान्छेले मात्रै उनलाई चिन्थे । उनमा रहेको प्रतिभालाई कमैले चिनेका कारण सबैको माझ आउन रविले धेरै कुर्नु पर्यो ।
नेपाल आइडलको मञ्च पाएपछि भने रविले चर्चित गायकभन्दा कम चर्चा पाएका छैनन् । उनका समर्थक स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि कयौं भइसकेका छन् । विदेशबाट पनि उनको आवाजको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । यो गफ होइन, यथार्थ हो । यसका उदाहरण सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टुइटर इत्यादि) मा प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
रवि सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्दथे । गीत तथा नृत्युप्रतिको अत्यधिक रुचिले आज उनी यो स्थानमा पुगेका छन् । भनिन्छ ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’, रवि पनि सानैदेखिका मिठो स्वरका धनी हुन् । यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा उनले झण्डै ४ वर्षअघि गाएको गीत चर्चामा छ । रविको यो पूरानो भिडियोमा उनले पाँच मिनेटको समयमा ‘हिन्दी’ र ‘नेपाली’ गीत गाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस रविले भने ‘समर्थकलाई बयान गर्ने शब्द नै छैन, अब पनि त्यही साथको अपेक्षा’
यो भिडियो हेरेपछि धेरै दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । अधिकांश व्यक्तिले उनलाई ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ को उपमा दिएका छन् । तपाई पनि हेर्नुस् चारवर्ष अघि रविले गाएका गीतको भिडियो-
रवि वडले ४ बर्ष अघि यसरी गाएका थिए।
Posted by Nepal's Raibar on Tuesday, 20 November 2018